Abapheki Ke Head Abapheki Job Inkcazelo / Uxanduva Template And Iindima – JobDescriptionSample
Animal Control Workers Job Inkcazelo / Imbopheleleko Template nemisebenzi
Home / Abapheki Ke Head Abapheki Job Inkcazelo / Uxanduva Template And Iindima
Ngqo yaye bathathe inxaxheba kumalungiselelo, imifuno, nokulungiselela of muffins zeentlanzi, inyama, imifino, salads, okanye ukudla ezongezelelweyo. Ngamana nokulungiselela izinto Ukukhetha iindleko, bathenge iimveliso, nokugcina idatha kunye akhawunti.
Hlola iimveliso zokutya uzilungiselele okanye ekrwada’ grade ukuqinisekisa ukuba iinqobo ziyaphunyezwa.
Iliso yesiqhelo zococeko ukuqinisekisa ukuba abasebenzi balandele okulindelekileyo kunye nemithetho.
Qinisekisa umgangatho kunye nobungakanani kweempahla ezifunyenweyo.
Zerikhwizishini okanye uthenga ukutya okanye izinto ezahlukeneyo kufuneka kakhulu ukuqinisekisa inkqubo leyo elasebenzayo.
Yihlo okanye bahlele nquleqhu abasebenzi okanye nabapheki nababhaki asebenza ekulungiseleleni ukutya.
Sebenza imimandla ukwenza ezithile, izixhobo, okanye ahlole izinto akahambelani ku criteria maphupho.
Yenza isigqibo ukutya kufuneka kuqaliswa ngayo ze avelise iimpawu ukutya izinto zokuhombisa.
Bonisa abapheki okanye abasebenzi abongeziweyo kwi nokulungiselela, ukupheka okanye umboniso izinto ezityiwayo.
Bala imali kunye neendleko kubalulekile inikeza, ezifana for ukutya umzekelo nezinto.
Ukusebenzisana nabasebenzi ezahlukileyo kuthathelwa ingqalelo loo sezulu nkqu isixa mhlawumbi zabazebenzisi okanye onyaka ukhetho iincindi ukucwangcisa ufumane iiresiphi okanye ukukhetha.
Hlola kotile ku amagunya amaxabiso ukuze kwemenyu izinto, lwesenzeko ukudla, umsebenzi, kunye neendleko iindleko.
Lungisa uze wenze izidlo zonke iintlobo, mhlawumbi phezu kwesiseko rhoqo okanye malunga abatyeleli kuphela okanye iimpawu.
Yenza isigqibo ajenda output nokubalulwa abasebenzi efunekayo ukuqinisekisa unikezelo rhoqo kwiinkonzo.
Fumana futhi ukuqesha abasebenzi, ezifana abapheki kunye nezinye abasebenzi ekhaya.
Ahlangane abathengi ukuya phezu lwemenu ze iimeko ezithile, ezifana imitshato umzekelo, amaqela, okanye umgidi.
Bonisa izenzo ezintsha zokupheka okanye iimveliso ukuba abasebenzi.
Thetha nabameli ingeniso ukuxoxa iindleko okanye ukuthenga izinto.
Cela fixes okanye uthenga nezixhobo.
indalo Ingxelo okanye inkcazelo eneenkcukacha malunga iintlobo ozinikiweyo.
Lungisa, primary, okanye liliso ulungiselela izinto ezityiwayo okanye imisebenzi zokupheka of amakhitshi eziliqela okanye eateries kwindawo ezabelwe ezifana umzekelo ikhonkco Diner, esibhedlela, okanye Motel.
isicwangciso okanye bazizuzela zonke iinkqubo ukutya ngaphakathi kumashishini kubandakanywa iiklabhu Ukuququzelela, Motels, okanye amatyathanga cafe.
Occupation Iintshukumo Isiqinisekiso
Isicatshulwa-Ukwazi wadala umxholo kunye nemigca e iifayile ezinxulumene nomsebenzi.
Ukuphulaphula-To Active into nabanye-abantu besithi onikeza ingqalelo epheleleyo, ukufumana ixesha ukubona iingongoma ukuba wawenziwe, imibuzo kokubuza elungile, kunokuba bhe kwi izihlandlo ephosakeleyo.
Publishing-Ukunxibelelana ngendlela eyiyo yabhalwa phantsi hayi nje ezingafanelekanga ukuba iimfuno ababukeli.
Ukuthetha-Ukuthetha nabanye ukudlulisa izibakala kwamandla.
Maths-Ukusebenzisa maths ukulungisa imiba.
iindlela Technology-Ukusebenzisa kunye nezikhokelo yezenzululwazi ukusombulula iingxaki.
Sicinga ukuba nokuqiqa ezibalulekileyo-nokusetyenziswa kunye nezizathu ukunakana nezithintelo kunye nezakhono kwiindlela, iziphumo okanye iimpendulo ababambeleyo iingxaki.
iinzuzo Learning-Ukuqonda inkcazelo entsha Iyasebenza ngokuphathelele zombini ezayo kwaye ngoku problemsolving kunye nokwenziwa kwezigqibo.
Ukufunda Iindlela-icholwa kwaye usebenzisa izicwangciso coachingPEReducational kunye neenkqubo ezifanelekileyo imeko ethile ukufundisa okanye xa sele uyincutshe ekudlaleni imiba idlamkile.
Monitoring-OverseeingOREvaluating ukusebenza ngawe, abantu ahlukeneyo, okanye iinkampani ukuthatha amanyathelo okulungisa okanye aveze zikude.
Social Perceptiveness-Ukwazi iimpendulo othersA ngoxa besenza kutheni usabela nokwazi.
izenzo nolungelelaniso-Ilungisa ngokunxulumene nemisebenzi othersI.
Azithenge-Effective abanye ukuba atshintshe iingqondo okanye izenzo zabo.
Uthetha-thethwano-Ukuhambisa abanye ngokudibeneyo nokuzama axolelanise mahluko.
Ukufundisa-Ukuyalela abanye nje indlela bafudukele.
Orientation-Ngokuqinisekileyo inkampani efuna ubuchule ukuba ukunceda abantu.
Advanced Problemsolving-Ukuchonga iingxaki ezintsonkothileyo kunye nokuphengulula ulwazi efanelekileyo ukuhlola kunye nokuphuhlisa okunokwenzeka ekukhangeleni izisombululo.
Amashishini Evaluation-Ukuhlolisisa iimfuno kunye nokubalulwa into ukwenza uyilo.
Technology Design-Technology ukuba abathengi kunye esalo izixhobo okanye ekuveliseni iminqweno.
Gear Ukhetho-isigqibo uhlobo izixhobo kunye nezixhobo kwafuneka imfuneko yokwenza umsebenzi.
Ifakela-Ifaka koomatshini, izixhobo, ezintambo, okanye iinkqubo ukuhlangabezana iinkcukacha.
iiphakheji computer Programming-Ukubhala malunga iinjongo eziliqela.
Imisebenzi iminxeba Monitoring zokubukela, into yokulinganisa, okanye ezinye maza ukuqinisekisa kukho izixhobo ukwenza ngokufanelekileyo.
Ukuqhuba Handle-Ukulawula imisebenzi izixhobo okanye izixhobo.
Izixhobo Ulondolozo-oLawulayo nokuyicoca into zesiqhelo kwi gear yesigqibo xa.
Zokusombulula-Ukuchonga izizathu glitche yokusebenza ukhetha ukuba uqhubeke njani le.
Ukulungisa-ukulungisa iinkqubo okanye izixhobo kusetyenziswa iindlela ezidingekayo.
Ulawulo Quality Evaluation-Ukuzaliswa iimviwo kwaye iitsheki izinto, iinkonzo, okanye imisebenzi ukuze alinganise ukusebenza okanye umgangatho.
iinzuzo Making-Ukuqwalasela Ubulumko Isigqibo kunye namaxabiso oluthelekisayo lwamanyathelo ukuba kukholeleka ukuba ukhethe lowo zivunywa.
Systems Analysis-isigqibo uhlengahlengiso ngayo emoyeni, imisebenzi, kunye iimeko nefuthe neziphumo kunye luhlobo luni yokuzenza kufuneka enze.
Systems Evaluation-Ukuchonga amanyathelo okanye iimpawu zokusebenza kwakunye kuthelekiswa amabhongo nkqubo ekunene okanye imisebenzi ezifunekayo ukuphucula ukusebenza.
Timemanagement-Ukuphatha kwixesha ngawe kwakunye nabanye’ ixesha elinye.
Ulawulo Savings-Icacisa ngendlela imali oluza wachitha ukuze ufumane umsebenzi ugqityiwe, kunye ukugcinwa malunga nezi ndleko.
Imisebenzi ye Product Kuko-Usihlube nokufumana kusetyenziswe echanekileyo kwamaziko nezixhobo, kunye nezibonelelo iimveliso kwafuneka imfuneko ukwenza umsebenzi ethile.
Supervision labasebenzi Resources-Ukuvusa, isakhiwo, kunye noyena abantu njengoko zisebenza, ekuboneni abantu ephezulu lomsebenzi wakho.
Izidingo Education Isiqinisekiso ulwazi
Isixa-mali bavumile ukuba (okanye ezongezelelweyo mali EZIMBINI-yr)
Degree High School Senior (okanye kuGedaliya okanye iSatifikethi ukulingana High School Senior)
Engaphezulu kwe 4 iminyaka, kangangoko iminyaka emithandathu kubandakanya,
Task Authority Qualification Skills
ukunyamezela – %
Okutshiwo – %
Ukukhutshwa Abanye – %
ithembeke – %
Ukuqaphela Ubunzulu – %
Ukukhuthaza-Iinkonzo zemali, ezifana umzekelo mortgage, levy, and investments guidance to consumers of banking …